Alohan'ny hisafidianana a milina fanamainana zezika, mila manao fanadihadiana mialoha ny filanao fanamainana ianao:
Akora ilaina amin'ny sombiny: Inona avy ireo toetra ara-batana rehefa lena na maina? Inona ny fizarana granularity? Misy poizina, mora mirehitra, manimba na manimba?
Fepetra takiana: Inona ny atin'ny hamandoan'ny poti? Moa ve ny hamandoana aparitaka ao anaty poti? Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny votoatiny voalohany sy farany ho an'ny sombintsombiny? Inona ny mari-pana maina azo avela sy ny fotoana maina ho an'ny poti? Mila manitsy ny maripana fanamainana mandritra ny fizotran'ny fanamainana?
Fepetra takiana amin'ny fahaiza-manao: Mila alamina anaty tsivalana ve ny fitaovana sa tsy tapaka? Ohatrinona ny fitaovana tsy maintsy milina fanamainana zezika tantanana isan'ora? Maharitra hafiriana ny fahazoana vokatra farany avo lenta? Ahoana no fiantraikan'ny fizotry ny famokarana mialoha sy aorian'ny fanamainana ny safidin'nyfanamainana zezika?
Fepetra takiana kalitao amin'ny vokatra vita: Hihena ve ny fitaovana, hanimba tena, maina loatra, na ho voaloto mandritra ny fanamainana? Manao ahoana ny fanamiana ao anatiny? Inona no tokony ho mari-pana sy hakitroky ny vokatra farany? Mamokatra vovoka ve ny zavatra maina sa mila fanarenana faharoa?
Ny tena toe-piainana iainana eo amin'ny sehatry ny ozinina: ohatrinona ny habaka famokarana azo alaina ho an'ny fanamainana ao amin'ilay orinasa? Inona ny mari-pana, ny hamandoana ary ny fahadiovan'ny orinasa? Inona ny zavamaniry misy loharanon-karena mahomby, seranan-tsolika? Araka ny lalàna mifehy ny tontolo iainana eo an-toerana, ohatrinona ny tabataba, ny hovitrovitra, ny vovoka ary ny fahaverezan'ny angovo mafana avela ao amin'ilay orinasa?
Amin'ny fandinihana ireo olana ireo, ny sasany milina fanamainana zezika hofoanana izay tsy mety amin'ny famokaranao tena izy. Ohatra, ny toetra ara-batana na fanodinana akora fototra dia hanilika ny sasany milina fanamainana zezika, milina fanamainana zezika ampongabendanitra karazana setroka ho an'ny atin'ny hamandoana avo lenta, ny akora lehibe lehibe viscous toy ny mika dia tsy safidy mety. ny milina fanamainana zezika amponga Rotary mampita ny fitaovana eo am-panamainana azy amin'ny fihodinana sy ny fihodinana, saingy ity fandefasana passive ity dia tsy mitondra tsara ny fitaovana viscous ho any amin'ny outlet, satria miraikitra amin'ny rindrin'ny amponga sy ny fantsona etona na koa ny clots. Amin'ity tranga ity, ny conveyor spiral na ny milina fanamainana zezika multi-disc dia safidy tsara kokoa, ity fandefasana mavitrika ity, dia afaka mamindra haingana ny mika avy amin'ny seranan-tsakafo mankany amin'ny seranan-tsambo.
Diniho izao a milina fanamainana zezika izay mifanaraka amin'ny tena dian-tongotrao sy ny sehatry ny famokarana. Aza esorina ireo milina fanamainana zezika izay tsy mety amin'ny toetoetry ny famokarana efa misy na mitaky fanamboarana lafo na fanitarana. Diniho ihany koa ny tetibola sy ny fandaniana ary ny anton-javatra hafa.
Raha misafidy masinina fanamainana zezika avo lenta ianao hanatsarana ny fizotra fanamainana misy anao dia tsy maintsy dinihinao raha misy fitaovana hafa efa misy, toy ny mpampita, mpanome sakafo, milina fanosotra, milina fonosana, trano fanatobiana entana ary fitaovana hafa, dia afaka mifanaraka amin'ny famokarana masinina fanamainana zezika vaovao.
Rehefa mihena ny isan'ireo masinina fanamainana zezika dia ampiasao ny fitaovana efa misy sy ny tontolon'ny famokarana efa misy mba hitsapana raha tena mety tokoa ilay masinina fanamainana zezika.
● Ny fepetra fanamainana tsara indrindra ho an'ny fitaovana efa misy.
● Ny vokatry ny milina fanamainana zezika amin'ny toetra ara-batana amin'ny akora.
● Raha mifanaraka amin'ny fepetra takiana ny kalitao sy ny toetran'ny fitaovana maina.
● Mety ve ny fahaizan'ny milina fanamainana zezika?
Miorina amin'ireo valim-panadinana ireo, ny mpanamboatra ny milina fanamainana zezika afaka manome tolo-kevitra amin'ny antsipiriany ihany koa hamaly feno ny filanao fanamainana. Mazava ho azy, ny vidin'ny fametrahana sy ny fiasan'ny masinina fanamainana zezika ary ny fepetra fikojakojana manaraka ny masinina fanamainana zezika dia tsy azo odian-tsy hita.
Raha raisina avokoa ireo pitsopitsony etsy ambony ireo dia afaka mividy ianao ny milina fanamainana zezika mety indrindra.